Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ICosta Rica Iindaba eziDlayo » Kutheni bonke abantu baseCosta Ricans bengabemi ngokuzikhethela?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • ICosta Rica Iindaba eziDlayo • Iindaba ezise-El Salvador • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba eziPhukileyo zaseGuatemala • Iindaba zaseHonduras • iindaba • Iindaba zaseNicaragua • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
ENicaragua, eCosta Rica bonke babelana ngembali yosuku lwanamhlanje lweGuanacaste, oluthandwa kakhulu ziindwendwe kunye nabahlali baseCosta Rica.
IRiphabhlikhi yaseMelika ekuMbindi waseMelika ibhiyozela uSuku lweGuanacaste
Ulawulo lwaseSpain kumbindi waseMelika lwaphela ngo-1812 emva kweMfazwe yase-Mexico yenkululeko. Ngo-1824, iCosta Rica yayiyinxalenye ye- KwiRiphabhlikhi yase-Central America kunye namanye amazwe afana ne-El Salvador, iGuatemala, iHonduras, neNicaragua.
Usuku lweGuanacaste yiholide kawonkewonke eCosta Rica, ebhiyozelwa nge-25 kaJulayi. Kwintshukumo ekujongwe ukuba ivuselele icandelo lezokhenketho emva kwendyikityha ye-COVID-19, le holide izakuhanjiswa ngoMvulo olandelayo ukusukela ngo-2022 ukubheka phambili
Ukwaziwa nangokuthi 'Isihlomelo Sosuku lweNicoya' (La Anexión del Partido de Nicoya), olu suku lubonisa ukongezwa kweGuanacaste ngo-1824 xa eli phondo laba yinxalenye yeCosta Rica.
Ummandla waseGuanacaste wawuyinxalenye yeNicaragua kwaye unqamlezwe ngumantla weCosta Rica. Kwizixeko ezithathu ezikhulu zaseGuanacaste, bekukho iintlanganiso ezivulekileyo ezixoxa ngotshintsho olusuka eNicaragua luye eCosta Rica. Kwabizwa ireferendamu ukuba ithathe isigqibo malunga nento emayenziwe. Kwireferendamu, uNicoya noSanta Cruz bavote ewe ukuba bajoyine iCosta Rica, ngelixa iLiberia ivotele ukuhlala neNicaragua. Iziphumo zizonke bezikhetha isihlomelo seCosta Rica.
IRiphabhlikhi yase-Central American Federal yapasisa umthetho kwaye yawusayina ngoJulayi 25, 1824, ivumela iPhondo laseGuanacaste ukuba libe yinxalenye yommandla weCosta Rican.
Unyaka ngamnye, nge-25 kaJulayi, undwendwe lwaluya kubona into encinci hlukile iyenzeka. Abantwana besikolo abekho esikolweni. Iibhanki, iiofisi zikarhulumente kunye nezinye iindawo zeshishini zivaliwe. Abantu-ngakumbi abantwana abancinci-banxibe Isinxibo esiqhelekileyo (Isinxibo esiqhelekileyo, esihlala sibomvu, mhlophe, kwaye luhlaza okwesibhakabhaka).
Imfihlakalo, isonjululwe: Namhlanje ngu "Guanacaste Day" okanye ngokusesikweni, ukubhiyozelwa kwe- "la Anexión del Partido de Nicoya" (Isihlomelo seGuanacaste").
Iholide ibaluleke kakhulu apha eTamarindo, njengoko sikwiphondo laseGuanacaste-eyona ndawo ibalulekileyo yokubhiyozela usuku. Oko kwathethiyo, uSuku lweGuanacaste yeyona holide iphambili kuyo yonke iCosta Rica, hayi eGuanacaste kuphela: Namhlanje yiholide esemthethweni kuwo onke amaphondo asixhenxe. Namhlanje ihlonipha usuku apho ipeninsula yethu-ngoku iphondo-yaba yinxalenye yeCosta Rica. Namhlanje lusuku lokubhiyozela.
Kwaqala Zonke Iinkulungwane Edlulileyo…
Namhlanje iqala hayi namhlanje kodwa kwiminyaka emininzi eyadlulayo-kwiinkulungwane ezadlulayo, enyanisweni, xa iSpain yaqala ikoloniyoni ingingqi esiyazi ngoku njenge-Central America. Phakathi kwe-1500s (ikoloniyali) kunye nee-1800s zokuqala (inkululeko) uMbindi Merika wawunamaphondo aliqela aseSpain. Amaphondo amabini anje: Iphondo laseCosta Rica kunye nePhondo laseNicaragua.
Ngeli xesha, UPartido de Nicoya - indawo namhlanje, ebandakanya phantse lonke iphondo laseCosta Rica laseGuanacaste- juggled Ukunyaniseka kuwo omabini amaphondo eCosta Rica naseNicaragua. The umdlalo ikwasebenza ngokuzimela kwezopolitiko-ewe, ihlala inyanisekile kwikomkhulu laseSpain laseMelika eGuatemala.
Kwisithuba seenkulungwane ezintathu, UPartido de Nicoya iphuhlise ubudlelwane bezoqoqosho kunye nezorhwebo nePhondo laseCosta Rica. Ke, ngo-1812, xa iSpain yafuna abameli bephondo ukuba beze eCortes de Cádiz (kwiiNkundla zaseCadiz), uNicoya wakhetha ukuthumela ummeli wabo nomanyano lwaseCosta Rican. Umanyano lwaseburhulumenteni luzelwe.
Ngaphantsi kweshumi leminyaka kamva, ngo-1821, uMbindi Merika waba ezimeleyo eSpain. Ngo-1824, uMbindi Merika wayesele uzimele-geqe Intshona Melika de Centroamérica, ngenye indlela eyaziwa ngokuba yiRiphabliki yaseFederal yoMbindi Merika.
IGuanacaste: Ukhetho oluzimeleyo
The UPartido de Nicoya yayikukutshintsha: Ngaba bangazibandakanya neFederal Republic of Central America njengenxalenye yephondo elizimeleyo laseNicaragua, okanye njengenxalenye yephondo elizimeleyo laseCosta Rica?
Ngelo xesha, iNicaragua yayijamelene nogonyamelo neengxwabangxwaba zezopolitiko. ICosta Rica, kwelinye icala, yayinoxolo ngakumbi. Ukongeza, ubudlelwane phakathi kweCosta Rica kunye ne umdlalo besomelele (kwaye besomelela).
Kodwa ke, izinto zazingacacanga kakuhle: Kwakukho ubudlelwane bezopolitiko nezentlalo kuwo omabini amaphondo azimeleyo. Ke, xa iCosta Rica yandisa isimemo se-geopolitical UPartido de Nicoya, UNicoya ubize ivoti.
Iidolophu ezintathu ezinkulu zikaNicoya- iVilla de Guanacaste (ngoku eyiLiberia), iNicoya, kunye neSanta Cruz- bachitha iinyanga ezininzi ngo-1824, bexoxa ngamathuba. Ekugqibeleni, uNicoya noSanta Cruz bavota ewe: The UPartido de Nicoya iya kwongeza kwiCosta Rica.
Umhla wawungu Julayi 25, 1824.
Namhlanje, iCosta Rica imele uxolo kunye nentando yesininzi
Ke namhlanje nangayo yonke i-25 kaJulayi, kuyo yonke iCosta Rica, sibhiyozela ingingqi isigqibo soxolo (nedemokhrasi) ukujoyina ilizwe lethu elinoxolo (nedemokhrasi).
Luvakalelo oluya kuva kuyo yonke indawo kwaye uhlala usithi: “de la patria por nuestra voluntad ” - "ICosta Rican ngokuzikhethela." SiyiCosta Rican kuba sikhethe ukuba njalo, kwaye sonwabile kukhetho olo. Ke, namhlanje, uya kuva okuninzi umculo, bona ezimbalwa yomlilo, kwaye ucofe unyawo lwakho kwezinye umdaniso wesintu. Ukuba unethamsanqa, unokufumana i- umbukiso.
Kwaye ngelixa ukuyo, ungalibali ukubamba intende yesandla ityilla kunye neglasi ijusi yetamarind. Isiko leGuanacaste elinekratshi!